ကိုယ့်ချစ်သူကို ချစ်တဲ့အကြောင်း အမြဲဖော်ပြနေဖို့လိုအပ်လား??💕 – Trend.com.mm
ကိုယ့်ချစ်သူကို ချစ်တဲ့အကြောင်း အမြဲဖော်ပြနေဖို့လိုအပ်လား??💕
Posted on September 18, 2018 by Noel
တစ်ခါတစ်လေကိုယ့်ချစ်သူက “မင်းက ကိုယ်ချစ်သလောက်မချစ်ပါဘူးတို့၊တကယ်ရော သူ့ကိုချစ်ရဲ့လား၊ချစ်တယ်လို့ မခံစားရဘူး”တို့စသဖြင့် မေးခွန်းမျိုးတွေအမေးခံရဖူးမှာပါ။ဒီလိုအမေးခံရတဲ့အခါ အချစ်ကိုမယုံရကောင်းလားလို့စိတ်ဆိုးလိုက်မယ့်အစား ကိုယ်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာ သူမမြင်မိလောက်အောင် အချစ်ကိုမဖော်ပြခဲ့မိဘူးလား အရင်ဆုံးပြန်တွေးကြည့်ပါ။
တစ်ချို့တွေက အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတွေပေါ့ ချစ်တော့ချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ ချစ်တာကို တစ်ဖက်လူသိအောင်မပြောပြတတ်ဘူး။ချစ်လားမေးတဲ့အချိန်ကလွဲလို့ ဘာသိဘာသာပဲနေတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့ အေးစက်စက်နိုင်လိုက်တာ၊တကယ်ရော သူ့ကိုချစ်ရဲ့လားဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်သွားစေမှာမလွဲပါဘူး။ယောက်ျားလေးထဲမှာဆိုလည်း တစ်ချို့တစ်လေ ကိုယ့်ချစ်သူမိန်းကလေကို အသက်မကချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ အချစ်ခံရတဲ့ခံစားချက်မျိုးမပေးနိုင်ဘူး။ဒါဖြင့် ဘယ်လိုမျိုးဆို ကိုယ်သူ့ကိုချစ်တဲ့အကြောင်း၊သူအချစ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သိသာစေမှာလဲ? ကိုယ့်ချစ်သူကို ချစ်ကြောင်းပြဖို့ ရိုးစင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဘယ်လောက်သေးကွေးတဲ့အပြုအမူပဲဖြစ်ပါစေ အဲဒါတွေက တန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်တွေနဲ့လဲလှယ်လို့မရပါဘူး 🌻
ခဏတဖြုတ်တွေ့ရတဲ့အချိန်တွေ၊တစ်ရက်တစ်လေတွေ့ခွင့်ရတဲ့အချိန်တွေမှာ ကိုယ်သူ့ကိုဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာပြပါ။သူကြိုက်တတ်တဲ့ချောကလက်လေးဝယ်လာတာ၊သူကြိုက်တတ်တဲ့မုန့်လေးတွေဝယ်လာတာစတဲ့အပြုအမူတွေကလည်း ကိုယ့်ကိုအလေးထားတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုး
၀င်လာစေပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ကောင်းကောင်းပြန်ရောက်ရဲ့လားဂရုတစိုက်မေးမြန်းတာကလည်း မိန်းကလေးတွေစိတ်ထဲလိုချင်တဲ့ဂရုစိုက်မှုတစ်ခုပါပဲ။သူကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာလေးတွေသတိရနေရင်ကို ဒါက ချစ်ခြင်းကိုဖော်ပြတဲ့အပြုအမူတစ်ခုပါပဲ။
အရင်တုန်းက သူဘာပြောပြော ကိုယ်လည်းနားထဲဝင်တစ်ချက်မ၀င်တစ်ချက်၊သူပြောခဲ့တာလည်းမမှတ်မိ၊သူကြိုက်တတ်တဲ့အစားအစာ၊အရောင်တွေကိုလည်းသတိမထားမိလိုက်တာမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်က ကိုယ်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အပြောနဲ့တင်မက အပြုအမူနဲ့ပါသိစေချင်ရင် နောက်ထပ်သူပြောလာမယ့်စကားတွေကို အာရုံစိုက်ပြီးအလေးထားနားထောင်ပေးပါ။
အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့စကားဖြစ်လို့ ရိုးသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကား နေ့တိုင်းပြောလေ ထပ်ခါထပ်ခါပြောလေ ယုံကြည်မှုပိုပြီးတိုးလာစေပါတယ်။တစ်ရက်တစ်လေ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမပြောလိုက်မိရင် နားမထောင်ခဲ့ရရင် အချစ်ရေးမှာ တစ်ခုခုလိုအပ်နေသလို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ဒီစကားလေးပြောဖို့က မပင်ပန်းပါဘူးနော် 😉
*ဘယ်လောက်အလုပ်ရှုပ်ရှုပ် ချစ်တဲ့သူအတွက် အချိန်ပေးပါ
ဘယ်လောက်ပဲအလုပ်များများ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့လျှောက်လည်ဖို့၊စကားပြောဖို့ အချိန်ပေးသင့်ပါတယ်။ဒါက ကိုယ်သူ့ကိုချစ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါ။မတရားအလုပ်တွေရှုပ်နေရင်တောင် အချိန်နည်းနည်းလေးဖဲ့ပေးတာက သူ့ကို ကိုယ်ဘယ်လောက်အလေးထားတယ်၊
အရေးပေးတယ်။ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာ ပြနိုင်တဲ့ အပြုအမူလေးတစ်ခုပါပဲ။
ချစ်တယ်ဆိုတာကို အမြဲတမ်းဖော်ပြနေဖို့လိုသလားဆို လိုအပ်ပါတယ်လို့ ဖြေရမှာပါပဲ။ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ချစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြတာ၊အမူအရာအပြုအမူလေးတွေနဲ့သိစေတာက အကျိုးမယုတ်ပါဘူးနေ်ာ။ကိုယ်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာ သူ့စိတ်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲခံစားရစေဖို့ ကြိုးစားတာက ကြည်နူးစရာလည်းကောင်းတယ်ဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။အချစ်မှာ ဘယ်သူကတော့ ပိုချစ်ရတယ်၊ဘယ်သူကတော့ အချစ်လျော့တယ်ဆိုတာမရှိပေမဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်တယ်ဆိုတာ အမြဲတမ်းဖော်ပြပေးမယ်ဆိုရင် ဒီအချစ်ရေးမှာ သူကိုယ့်ကိုမချစ်ဘူးလို့ခံစားရစရာ မလိုသလို မလုံလောက်ဘူးဆိုပြီးအချစ်ကိုထပ်ရှာနေမယ့်ပြဿာနာမျိုးတွေလည်းမကြုံရတော့ပါဘူး။ကြီးကြီးမားမားနဲ့ချစ်တဲ့အကြောင်းသက်သေပြစရာမလိုပါဘူး။နေ့တိုင်းပြုမူနေကျ အပြုအမူသေးသေးလေးတွေကိုပဲ ပိုပြီးအလေးထားအာရုံစိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ် 💕
တဈခါတဈလကေိုယျ့ခဈြသူက “မငျးက ကိုယျခဈြသလောကျမခဈြပါဘူးတို့၊တကယျရော သူ့ကိုခဈြရဲ့လား၊ခဈြတယျလို့ မခံစားရဘူး”တို့စသဖွငျ့ မေးခှနျးမြိုးတှအေမေးခံရဖူးမှာပါ။ဒီလိုအမေးခံရတဲ့အခါ အခဈြကိုမယုံရကောငျးလားလို့စိတျဆိုးလိုကျမယျ့အစား ကိုယျသူ့ကိုခဈြတယျဆိုတာ သူမမွငျမိလောကျအောငျ အခဈြကိုမဖျောပွခဲ့မိဘူးလား အရငျဆုံးပွနျတှေးကွညျ့ပါ။
တဈခြို့တှကေ အထူးသဖွငျ့မိနျးကလေးတှပေေါ့ ခဈြတော့ခဈြတယျ။ဒါပမေဲ့ ခဈြတာကို တဈဖကျလူသိအောငျမပွောပွတတျဘူး။ခဈြလားမေးတဲ့အခြိနျကလှဲလို့ ဘာသိဘာသာပဲနတေတျကွတယျ။အဲ့ဒီအခါကတြော့ အေးစကျစကျနိုငျလိုကျတာ၊တကယျရော သူ့ကိုခဈြရဲ့လားဆိုတဲ့အတှေးတှဝေငျသှားစမှောမလှဲပါဘူး။ယောကျြားလေးထဲမှာဆိုလညျး တဈခြို့တဈလေ ကိုယျ့ခဈြသူမိနျးကလကေို အသကျမကခဈြတယျ။ဒါပမေဲ့ အခဈြခံရတဲ့ခံစားခကျြမြိုးမပေးနိုငျဘူး။ဒါဖွငျ့ ဘယျလိုမြိုးဆို ကိုယျသူ့ကိုခဈြတဲ့အကွောငျး၊သူအခဈြခံရတယျဆိုတဲ့အကွောငျး သိသာစမှောလဲ? ကိုယျ့ခဈြသူကို ခဈြကွောငျးပွဖို့ ရိုးစငျးတဲ့နညျးလမျးလေးတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။ဘယျလောကျသေးကှေးတဲ့အပွုအမူပဲဖွဈပါစေ အဲဒါတှကေ တနျဖိုးကွီးလကျဆောငျတှနေဲ့လဲလှယျလို့မရပါဘူး 🌻
ခဏတဖွုတျတှရေ့တဲ့အခြိနျတှေ၊တဈရကျတဈလတှေခှေ့ငျ့ရတဲ့အခြိနျတှမှော ကိုယျသူ့ကိုဂရုစိုကျတယျဆိုတာပွပါ။သူကွိုကျတတျတဲ့ခြောကလကျလေးဝယျလာတာ၊သူကွိုကျတတျတဲ့မုနျ့လေးတှဝေယျလာတာစတဲ့အပွုအမူတှကေလညျး ကိုယျ့ကိုအလေးထားတယျဆိုတဲ့ခံစားခကျြမြိုး
ဝငျလာစပေါတယျ။အိမျပွနျရောကျတဲ့အခါ ကောငျးကောငျးပွနျရောကျရဲ့လားဂရုတစိုကျမေးမွနျးတာကလညျး မိနျးကလေးတှစေိတျထဲလိုခငျြတဲ့ဂရုစိုကျမှုတဈခုပါပဲ။သူကွိုကျတတျတယျဆိုတာလေးတှသေတိရနရေငျကို ဒါက ခဈြခွငျးကိုဖျောပွတဲ့အပွုအမူတဈခုပါပဲ။
အရငျတုနျးက သူဘာပွောပွော ကိုယျလညျးနားထဲဝငျတဈခကျြမဝငျတဈခကျြ၊သူပွောခဲ့တာလညျးမမှတျမိ၊သူကွိုကျတတျတဲ့အစားအစာ၊အရောငျတှကေိုလညျးသတိမထားမိလိုကျတာမြိုးရှိပါလိမျ့မယျ။ကိုယျက ကိုယျသူ့ကိုခဈြတယျဆိုတဲ့အကွောငျး အပွောနဲ့တငျမက အပွုအမူနဲ့ပါသိစခေငျြရငျ နောကျထပျသူပွောလာမယျ့စကားတှကေို အာရုံစိုကျပွီးအလေးထားနားထောငျပေးပါ။
အမွဲတမျးပွောနတေဲ့စကားဖွဈလို့ ရိုးသှားတယျဆိုတာမရှိပါဘူး။ခဈြတယျဆိုတဲ့စကား နတေို့ငျးပွောလေ ထပျခါထပျခါပွောလေ ယုံကွညျမှုပိုပွီးတိုးလာစပေါတယျ။တဈရကျတဈလေ ခဈြတယျဆိုတဲ့စကားမပွောလိုကျမိရငျ နားမထောငျခဲ့ရရငျ အခဈြရေးမှာ တဈခုခုလိုအပျနသေလို ခံစားရတတျပါတယျ။ဒီစကားလေးပွောဖို့က မပငျပနျးပါဘူးနျော 😉
*ဘယျလောကျအလုပျရှုပျရှုပျ ခဈြတဲ့သူအတှကျ အခြိနျပေးပါ
ဘယျလောကျပဲအလုပျမြားမြား ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့လြှောကျလညျဖို့၊စကားပွောဖို့ အခြိနျပေးသငျ့ပါတယျ။ဒါက ကိုယျသူ့ကိုခဈြတဲ့အကွောငျးဖျောပွဖို့အကောငျးဆုံးနညျးလမျးတဈခုပါ။မတရားအလုပျတှရှေုပျနရေငျတောငျ အခြိနျနညျးနညျးလေးဖဲ့ပေးတာက သူ့ကို ကိုယျဘယျလောကျအလေးထားတယျ၊
အရေးပေးတယျ။ဂရုစိုကျတယျဆိုတာ ပွနိုငျတဲ့ အပွုအမူလေးတဈခုပါပဲ။
ခဈြတယျဆိုတာကို အမွဲတမျးဖျောပွနဖေို့လိုသလားဆို လိုအပျပါတယျလို့ ဖွရေမှာပါပဲ။ကိုယျခဈြတဲ့သူကို ခဈြတဲ့အကွောငျးပွောပွတာ၊အမူအရာအပွုအမူလေးတှနေဲ့သိစတောက အကြိုးမယုတျပါဘူးနျော။ကိုယျသူ့ကိုခဈြတယျဆိုတာ သူ့စိတျထဲကနေ လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲခံစားရစဖေို့ ကွိုးစားတာက ကွညျနူးစရာလညျးကောငျးတယျဆိုတာ သိလာပါလိမျ့မယျ။အခဈြမှာ ဘယျသူကတော့ ပိုခဈြရတယျ၊ဘယျသူကတော့ အခဈြလြော့တယျဆိုတာမရှိပမေဲ့ တဈယောကျကိုတဈယောကျ ခဈြတယျဆိုတာ အမွဲတမျးဖျောပွပေးမယျဆိုရငျ ဒီအခဈြရေးမှာ သူကိုယျ့ကိုမခဈြဘူးလို့ခံစားရစရာ မလိုသလို မလုံလောကျဘူးဆိုပွီးအခဈြကိုထပျရှာနမေယျ့ပွဿာနာမြိုးတှလေညျးမကွုံရတော့ပါဘူး။ကွီးကွီးမားမားနဲ့ခဈြတဲ့အကွောငျးသကျသပွေစရာမလိုပါဘူး။နတေို့ငျးပွုမူနကြေ အပွုအမူသေးသေးလေးတှကေိုပဲ ပိုပွီးအလေးထားအာရုံစိုကျပေးဖို့လိုပါတယျ 💕
အကောင်းဆုံးမိတ်ကပ်တွေ ဘယ်လောက်သုံးသုံး အသားရည်ကို ဂရုစိုက်တတ်ဖို့လည်းလို